Afrobarometer Inoti Mapurisa Ndiwo Oita Huori Hunotyisa
Mbudzi 14, 2013
WASHINGTON — Ongororo yakaburitswa neAfrobarometer neChitatu inoratidza kuti Zimbabwe iri pachidanho chechitatu munyika dzemuAfrica dzine huori hwakanyanyisa huri kutadza kupedzwa nehurumende.
Ongororo iyi yakaitwa munyika makumi matatu neina dzemu Africa pakati paGumiguru 2011 naGumiguru 2013. Nyika iri pamusoro soro muAfrica iNigeria ichiteverwa neEgypt.
Nyaya yehuori muZimbabwe inonzi yakawedzera nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana kubva muna 2002 kusvika muna 2012. Panyika dzemuAfrica, Malawi ndiyo inonzi haina huori hwakanyanya.
Ongororo iyi inoti yakaonawo kuti mapurisa ndiwo ari kuita huori zvakanyanyisa munyika dzemuAfrica.
Nyaya yehuori yagara ichinetsa muZimbabwe kusanganisira nyaya yeWillowgate Scandal kuma 1986 apo makurukota ehurumende ainzi aishandisa masimba avo mukutenga motokari nemutengo uri pasi, asi vachizotengesa motokari idzi nemari iri pamusoro.
Nyaya yehuori inonzi iri kuitikawo kumangoda. Dzimwe nyaya dzehuori dzinosanganisira nyaya yevakuru muhurumende vekuba mari yekuvaka dzimba kana kuti VIP Housing Scandal kuma 1995; nyaya dzakaita sekubiwa kwakaitwa mari yevakaremadzwa muhondo, kana kuti War Victims Compensation Fund muna 1997, pamwe nenyaya dzekukubiwa kwemari kuNoczim kuma 1999.
Mukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, vakashandisawo mari yehurumende zvisiri pamutemo mukuvaka zvivakwa zvavo munyaya yakaburitswa ne Standard Newspaper muna 2000.
VaChihuri vakazobvuma kuti pane zvakakanganiswa pakubhadharwa kwezvivakwa izvi izvo vanoti zvakazoita kuti pashandiswe mari yehurumende.
VaChihuri, munguva iyi, vakati vakazodzora mari yaidarika zana rezviuru zvemadhora kuhurumende mushure mekunge zvabuda pachena kuti mari yehurumende yakanga yashandiswa mukutenga zvinhu zvakavakwa pamba yavo,kusanganisira zvibhorani zvakavakwa pamba iyi.
Asi VaChihuri havana kukwanisa kuratidza bepanhau re Standard madzosero avanoti vakaita mari iyi kuhurumende kunyange hazvo magwaro aive nebepanhau iri airatidza kuti hapana mari yakadzoserwa.
Vanorwisa huori vanoti nyaya zhinji dzehuori dzakaitika munguva yehurumende yemubatanidzwa hadzina kubatwa zvakafadza veruzhinji. Vakawanda vainge vachifunga kuti kuvapo kwesangano reAnti-Corruption Commission, iyo yakatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, muna 2011, kwaizobatsira asi zvinenge zviri kukona n’anga murapwa achida.
Sangano iri rinoti harina mazino nekudaro riri kutadza kuita basa nemazvo.
Vaimbova gurukota rezvekudzivirirwa kwehuori uye vaiva nhengo yeZanu-PF, VaMunyaradzi Paul Mangwana, vanoti huori hurimo munyika asi zvekuti Zimbabwe yanyanyisa ndezvemanyepo.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, VaAlois Chaumba, vanoti huori hwanyanyisa muZimbabwe.